शुक्रका उपग्रहहरू: सिद्धान्तहरू, जिज्ञासा र रहस्यहरू | नेटवर्क मौसम विज्ञान
El ग्रह भेनस यो एक ग्रह हो जुनमा प्राकृतिक उपग्रहहरू छैनन्। यो हाम्रो सौर्यमण्डलमा सूर्यबाट दोस्रो ग्रह हो र हाम्रो ग्रहबाट धेरै उज्यालो वस्तुको रूपमा देख्न सकिन्छ। यसलाई बिहानको ताराको ग्रह भनिन्छ किनकि यो सूर्यास्त जस्तै देखिन्छ। यो देखिनको लागि पश्चिमी स्थितिमा राखिएको छ। त्यहाँ केहि थियरीहरु छन् जुन हामीले देख्यौं उपग्रहहरुमा छैन र त्यसैले हामी यस बारे कुरा गर्ने छौं भेनसको उपग्रह.
यस लेखमा हामी तपाईंलाई भनुसको उपग्रहहरू र उनीहरूको रहस्यको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउन जानेछौं।
1 शुक्र ग्रहको विशेषताहरु
2 केहि जिज्ञासाहरु
3 भेनसको उपग्रह
4 शुक्रको उपग्रहको बारेमा थियरी
शुक्र ग्रहको विशेषताहरु
सर्वप्रथम यस ग्रहको केही विशेषताहरू थाहा पाउनु भनेको रहस्यहरू जान्नु अघि हामीले यसमा कुनै उपग्रहहरू छैनन् भनेर तथ्यलाई घेर्दछ। प्राचीन कालदेखि यस ग्रहलाई हस्पेरसको नामले चिनिन्थ्यो जब साँझबाट देखिन्थ्यो। उसको अर्को नाम पनि थियो र बिहान देखि देख्दा लुसिफर थियो। हामीलाई थाहा छ कि शुक्र यो सूर्योदयभन्दा hours घण्टा भन्दा पहिले वा सूर्यास्त पछि hours घण्टा भन्दा बढी देखिन सकिदैन। पहिलो खगोलविद् जसले भेनसको अध्ययन गर्न थालेका थिए भन्ने सोच्थे कि तिनीहरू दुई बिल्कुल अलग आकाशीय पिण्डहरू हुन् भन्ने तथ्यलाई वास्तविकता हुन सक्छ।
यदि यो टेलिस्कोपबाट अवलोकन गरियो भने यो ग्रहको चन्द्रमा जस्तै बिभिन्न चरणहरू छन्। प्रत्येक चोटि शुक्रले अधिकतममा आफ्नो पास पूरा गरेपछि यो सानो आकारमा देख्न सकिन्छ किनकि तिनीहरू सूर्यदेखि टाढा छन्। यसको विपरित, जे जस्तो देखिन्छ यो तार्किक छैन, यो ग्रहको अधिकतम चमकको स्तर यो बढेको चरणमा हुँदा यो पुग्न सकिन्छ।
चन्द्रमाको साथ मिल्दोजुल्दो कुरा पनि शुक्रसँग हुन्छ। यसको चरणहरू र स्थानहरू १. 1.6. बर्षको अवधिमा दोहोरिन्छन्। खगोलविद्हरूले यस ग्रहलाई पृथ्वीको भाई ग्रहको रूपमा लिन्छन्। र यो आकार, द्रव्यमान, घनत्व र भोल्युममा धेरै समान ग्रह हो। वैज्ञानिकहरूको विचारमा यो हो र शुक्र ग्रह हाम्रो जीवनको सूर्यबाट यस्तै दूरीमा जीवनलाई वशमा राख्न सक्थे। तर, सौर्यमण्डलको अर्को क्षेत्रमा भएकोले, यो एक ग्रह भएको छ जुन हाम्रो अवस्था भन्दा धेरै फरक छ।
यसको मुख्य विशेषताहरू मध्ये यो यो हो कि यसमा समुद्र छैन र यसमा उपग्रह पनि छैन। उपग्रहहरूको केही थियरीको पछाडि हुनुपर्दछ जुन हामी तल हेर्नेछौं। यो पनि धेरै भारी वातावरणले घेरिएको छ जसको मुख्यतया कार्बन डाइअक्साइडको संरचना हुन्छ र यसैले पानीको बाफ हुँदैन। फ्लोटिंग क्लाउडहरू जुन अधिक शक्तिशाली टेलिस्कोपहरूसँग देख्न सकिन्छ सल्चुरिक एसिडले बनेको छ। हाम्रो ग्रहलाई के हुन्छ जस्तो नभई, हामी वायुमण्डलीय दबाव 92 २ गुणा बढी पाउँदछौं। यसको मतलव कुनै पनि मानिस एक मिनेट को लागी यस ग्रहमा बाँच्न सक्दैन।
यस ग्रहलाई चिन्तित पार्ने उत्सुकता मध्ये एउटा यो हो कि यो चर्को ग्रहको रूपमा चिनिन्छ। र यो यो हो कि यसको सतहको तापक्रम 482 XNUMX२ डिग्री आसपास छ। तापमान एक महान हरितगृह प्रभाव को कारण हुन्छ कि यसको वातावरण यति घना र भारी भएको उत्पादन गर्दछ। ग्रह पृथ्वी भन्दा फरक, जसले ग्रीनहाउस प्रभाव पार्दछ जसले रमाईलो तापक्रम बढाउन मद्दत गर्दछ, यहाँ यो बढाइचढाइ गरिएको छ। सबै ग्याँसहरू यसको वातावरण द्वारा फन्दामा छन् र अन्तरिक्ष पुग्न सक्षम छैनन्। यसले शुक्रलाई बुध भन्दा पनि तातो बनाउँदछ जबकि यो सूर्यको नजिक छ।
शुक्रमा एउटा दिन पृथ्वीमा २ 243 दिन बराबर छ र यसको सम्पूर्ण बर्ष भन्दा लामो छ जुन २२225 दिनसम्म रहन्छ। त्यो हो, सूर्यको वरिपरि घुम्न यसले धेरै समय लिन्छ। एउटा अन्तिम जिज्ञासा यो छ कि यदि एक व्यक्ति यहाँ रहन सक्थ्यो भने, तिनीहरूले पश्‍चिममा सूर्य कसरी उदाउँछ र पूर्वमा सूर्यास्त कस्तो हुन्छ भनेर उनीहरूले देख्न सक्थे।
सौर्यमण्डलमा वीनसका उपग्रहहरूको असंख्य सिद्धान्तहरू छन्। सौर्यमण्डलमा धेरै चन्द्रमाहरू छन् भन्ने तथ्यको बावजुद पनि केहिहरुमा जुन चन्द्रमा जस्तो वातावरण छैन अरुमा टायटन जस्ता बाक्लो वातावरण हुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि शुक्रसँग कुनै उपग्रह छैन। हामीलाई थाहा छ कि सौर्यमण्डलमा शुक्र र बुध ग्रहहरू केवल ती ग्रहहरू छन् जसमा परिक्रमा गर्ने प्राकृतिक चन्द्रमा छैन। यसको कारण यस्तो छ जुन इतिहासका धेरै वैज्ञानिकहरूले खोजी गरेका छन्।
यो यहाँ छ कि खगोलविद्हरूले केहि सम्भावनाहरु लाई विचार गर्दछन् जसले वर्णन गर्न सक्छ कि यी दुई ग्रहहरुमा किन चन्द्रमा छैन। पहिलो यो हो कि प्राकृतिकग्रहहरू यी ग्रहहरूको गुरुत्वाकर्षणको साथ कैद गरियो जब तिनीहरू नजिक पुगे। यो को मामला हुनेछ Las मार्स को सानो चंद्रमा Phobos र Deimos को रूपमा परिचित। अर्को परिदृश्य जुन अवलोकन गर्न सकिन्छ, त्यो हो कि ग्रह शुक्रले ठूलो प्रभाव पार गर्ने छ जुन अन्तरिक्षमा यसको सामग्रीको एक भाग बाहिर निकाल्छ। यो सामग्री पछि उपग्रह गठन, जुन हाम्रो चन्द्रमा को मामला मा छ।
शुक्रको उपग्रहको बारेमा रहेको अन्य सिद्धान्तहरू यो हो कि यो ग्रहको साथ सँगै ग्रहको गठन गर्न सकिन्छ जुन शुक्रको गठनको क्रममा छोडियो। यस तरीकाले, चन्द्रमाहरू समग्रमा ग्रहको अंश हुनेछन्।
शुक्रको उपग्रहको बारेमा थियरी
प्रारम्भिक सौर्यमण्डल सम्बन्धी केहि अव्यवस्थित र गतिशील सिद्धान्तहरूलाई ध्यानमा राखी, हामीले थाहा पाउनुपर्दछ कि त्यहाँ हजारौं साना शरीरहरू थिए जुन विभिन्न ग्रहहरूको कक्षाको बीचमा परिक्रमा गरिरहेका थिए। यो यहाँ छ कि वैज्ञानिकहरु लाई यो तथ्यले छक्यो कि हामीहरुसंग कुनै प्राकृतिक उपग्रह छैन। यहाँ उनलाई विन्सलाई विगतमा चन्द्रमाहरू हुनसक्थ्यो भन्ने प्रश्न सोधिएको छ। केही अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसन्धान प्रस्तुत गरे जुन तिनीहरू दावी गर्न सक्थे शुक्रले कम्तिमा ठूला निकायहरुबाट कम्तिमा २ ठूला असरहरु भोग्न सक्थ्यो विगतमा उनीहरूले आफ्नो चन्द्रमा हराए।
सम्भवतः, वीनसको मलबेबाट सानो चन्द्रमा गठन भएको हुन सक्छ जुन ठूलो शरीरको ठूलो प्रभाव पछि ग्रहबाट निकालियो। गुरुत्वाकर्षणको शक्तिहरूको कारण, उपग्रह दूर भइरहेको थियो जब सम्म यो वीनसको गुरुत्वाकर्षणबाट प्रभावित भएन। यस प्रकारले, यो सम्भावना छ कि ग्रहले पछि केहि प्रभावहरूलाई पराजित गर्‍यो र ग्रहको परिक्रमणलाई विपरित गर्‍यो, जसले विपरित प्रभाव निम्त्यायो। यो ज्वारको प्रभावको कारण उपग्रहलाई शुक्रबाट टाढा सार्दछ।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईले शुक्रका उपग्रह र तिनीहरूको अनुपस्थितिको बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » भेनसको उपग्रह
सौर विकिरणका प्रकारहरू